Tongasoa eto Huiyuweiye
Huiyu Fluid nanatrika Analytica 2018 tany Munich Alemana
Huiyu fluid dia nanatrika an'i Analytica 2018 any Munich Alemana. Trano fivarotan'i Huiyu, B1.528-6 #, Paompy tsara kalitao mahavariana mahavariana mpitsidika matihanina an-jatony. Momba an'i Analytica Ny an'izao tontolo izao an-tsokosoko momba ny varotra dia antoky ny fahombiazanao amin'ny fampisehoana mahomby ny laboratoara te ...
Huiyu fluid dia nanatrika ny BCEIA2019 ary hanatrika ny BCEIA2021 any Beijing. . Tsidiho ny trano heva an'i Huiyu, 6A011 #, raha te hahalala momba ny paompy Peristaltika fampiasa avo lenta an'ny orinasa amin'ny fitsaboana rano, laboratoara, fikarohana siantifika ary fampiharana. Ho fanampin'izay, tongava mitsidika ny booth mba hahitanao d ...
Ny fampiharana ny paompy Peristaltika amin'ny fitsaboana rano maloto
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fandrosoan'ny indostrialy sy ny tanàn-dehibe dia nitombo haingana ny toekarena ara-tsosialy, saingy ny olana momba ny fandotoana taty aoriana dia nanjary olana lehibe mila vahana haingana. Ny fitsaboana maloto dia nanjary nilaina tsikelikely ho an'ny toekarena ...